Ny Tany | Izay Lazain’​ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona ny fikasan’Andriamanitra momba ny tany?
‘Izao no nolazain’i Jehovah, ilay Mpamolavola ny tany. Tsy hoe tsy misy antony ny namoronany azy fa nataony honenana.’—Isaia 45:18.
Maro no mihevitra hoe tsy nisy namorona ny tany fa tongatonga ho azy. Misy indray mpitondra fivavahana milaza fa fandalovana fotsiny, hono, ny tany, mba hitsapan’Andriamanitra an’izay mendrika ho any an-danitra sy izay ho any amin’ny afobe.
Milaza ny Baiboly fa “namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra.” (Genesisy 1:1) Hoy izy tamin’ilay mpivady voalohany: ‘Manàna taranaka, ary mihabetsaha ka mamenoa ny tany. Anjakao ny tany, ary aoka hanaiky anareo ny zavamananaina rehetra mihetsiketsika eny ambonin’ny tany.’ (Genesisy 1:28) Tsy misy resaka mihitsy eo hoe ho faty ny olona. Raha tsy mankatò an’Andriamanitra ihany izy ireo vao ho faty. (Genesisy 2:17) Tian’Andriamanitra ho velona mandrakizay eto an-tany àry ny olona. Namorona ny tany izy mba hipetrahan’izay mankatò, ary nasainy nikarakara azy io izy ireo.
Ho potika ve ny tany indray andro any?
“Naoriny ny tany, ary nataony mafy orina ny fototra iorenany, ka tsy ho voahozongozona mandrakizay doria.” —Salamo 104:5.
Antony maromaro no lazain’ny mpahay siansa fa mety hahapotika ny tany, na hahatonga azy io tsy ho azo iainana intsony. Anisan’izany ny hoe hisy vaingan-javatra na kintana hifandona amin’ny tany. Mety hisy volkano mahery hipoaka koa, hono, na ho lany ny herin’ny masoandro, na hiakatra be ny mari-panan’ny tany. Mety hanapoaka baomba niokleary koa ny olona, na hanaparitaka virosy mahafaty.
Tsy niova ny fikasan’Andriamanitra momba ny tany. ‘Maharitra mandrakizay ny tany’, hoy ny Mpitoriteny 1:4. Hisy olona hipetraka foana koa eto an-tany. Milaza mantsy ny Salamo 37:29 hoe: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”
Maro no mandanilany foana ny harena an-kibon’ny tany, satria mihevitra hoe ho potika ny tany indray andro any. Lasa tsy mieritreritra ny hoavy intsony koa ny sasany ka manaram-po amin’ny fiainana. Tsy tena manana tanjona àry izy, sady tsy dia misy dikany ny fiainany. Raha manantena ny hiaina mandrakizay eto an-tany kosa ny olona, dia hahay hitsinjo ny hoavy ka hiezaka foana hitady izay tena hahasoa azy sy ny fianakaviany.
Ho any an-danitra daholo ve ny tsara fanahy?
“Ny lanitra dia an’i Jehovah, fa ny tany kosa nomeny ho an’ny zanak’olombelona.” —Salamo 115:16.
Maro no mihevitra fa ho any an-danitra ny olona tsara rehetra.
Fonenan’Andriamanitra ny lanitra fa ny tany kosa no an’ny olombelona. Milaza anefa ny Baiboly hoe mbola ‘honenana ny tany’ amin’ny hoavy. (Hebreo 2:5) I Jesosy koa no olona voalohany niakatra tany an-danitra, ary voalazan’ny Baiboly fa olona vitsivitsy ihany no ho any an-danitra hiaraka aminy. Voafidy hanao asa manokana izy ireo satria “ho mpanjaka hitondra ny tany” miaraka amin’i Jesosy.—Apokalypsy 5:9, 10; Lioka 12:32; Jaona 3:13.
Tsy mifanaraka amin’izay tena ampianarin’ny Baiboly ilay hoe hankany an-danitra daholo ny tsara fanahy. Raha izany mantsy no izy dia tsy nanatanteraka ny fikasany momba ny tany Andriamanitra. Hoatran’ny hoe tsy nitana ny teniny izy rehefa nampanantena hoe hiaina mandrakizay eto an-tany ny olona. Manome toky anefa ny Baiboly hoe: “Aoka ianao hanantena an’i Jehovah sy hanaraka ny lalany, dia hanandratra anao izy ary handova ny tany ianao.”—Salamo 37:34.
Mety hahagaga anao ny zavatra resahin’ny Baiboly.
Hizara Hizara Ny Tany